Hooyooyinka iyo Caruurtu Waxay u baahan yihiin Feero
Moms and Kids Need Iron - Somali
Aalkoladda, tubaakadda, iyo daroogooyinka kale
Cun Cunto aan Cudur kuu Keenin
Cunooyinka feerada (iron) badan laga helo dhiig caafimaad aba ayey dhisaan. Qof caafimaad qaba si aad u noqoto waa muhiim in aad dhiig caafimaad qaba lahaato!
Maxaa dhacaya hadii jirkaagu feero ku filan aanu helin?
Feerada dhiigaaga ku jirta hoos ayey u dheceysaa. Xaaladan caafimaad daro waxaa la yiraahdaa aneemiyada ay feero yaridu keento (iron deficiency anemia) ama aneemiyo. Dadka qaarkiis waxay u yaqaanaan dhiig yari.
Hadii ay dhiig yari ku heyso, waad tabar yareyneysaa, qof daalan oo calaacal badanna waad noqoneysaa. Waad jiran kartaa hargabka si fudud ayuu kuugu dhacayaa. Muuqaaga iyo dareenkaagaba uma ekeenayaan sidii qof caafimaad qaba.
Caruurtu waxay noqdaan kuwo ooyin badan (kuwo ay wax ka ba'san yihiin), si fiicanna uma koraan waxna uma bartaan hadii heerka/lebeelka feeradu uu si joogto hoos ugu dhacsanaado.
Dumarku waxay u baahan yihiin feero dheeraad ah marka ay uurka leeyihiin. Ilmaha uurka ku jira uma korayo sidii la rabay hadii hooyadu ay aneemiyo qabto (dhiig yari qabto).
Sida aad u xaqiijin kartid in aad heshid feero kugu filan:
Raashin cun 3 jeer maalin kasta adiga oo cunayo cunooyin kala duwan. Cunooyinka caafimaadka leh badidooda waxaa ku jira wax yar oo feero ah, sidaas darteed cunidda cunooyin ka kala tirsan qaybaha cunooyinka waxay kaa caawineysaa in aad heshid feero kugu filan.
Iska yaree cunooyinka qaarkood sida chips (baradhada la shiilay), doolshaha, buskutka, nacnacca, iyo cabitaanada fudud.
Xusoosnoow in aad qaadatid kaniini kasta oo fitamiin ama feero ah ee uu dhakhtarkaadu kuu qoro.
Ka gooy ilmaha masaasada marka ay 1 sano jiraan.
Caruurta masaasada nuuga hal sano kadib waxay cabaan caano aad u badan. Ku koob caanaha caruurta la siiyo laba koob maalintii. Caanuhu nafaqo ayey leeyihiin, laakiin wax feero ah ma laha.
Ka fogoow cabitaanka shaaha iyo qaxwada aad raashinka ku cabeyso. Shaaha iyo qaxwada waxay jirkaaga ka reebaan inuu feerada kala baxo raashinka aad cuntay.
Dooro cunooyinka feerada badan leh.
Hilibka ayaa ugu fiican waxyaalaha feerada laga helo isaga ayuu jirkaaga si fudud dheefshiidkiisa u qaadan karaa.
• Hilibka lo'da
Dhirta/Geedaha xitaa waa ilo feero laga helo. Laakiin kaalmo ayey u baahan yihiin sidii uu jirku u qaadan lahaa.
• Cereal ka feerada-lagu-daray ee WIC
• Digir qalalan oo la kariyey (fuul)
• Digita alalan, nooca isha-madoow leh
• Cagaarka sida geedka mustard ka iyo aleenta begelka, koosto (spinach)
•Wad baaskiil sadex lug ama laba lugood leh
• Sabiibka, miraha apricots ee la qalajiyey, miraha prune la yihaado iyo cabitaanada iyaga laga sameeyey.
Jirkaagu awood ayuu u yeelan doonaa in uu si fiican u isticmaalo feerada dhirta laga helo hadii aad raashinkan la qaadatid:
Hilib, kaluun/malaay iyo hilibka digaaga
Cunooyinka laga helo fitamiinka:
• Liinto oronjada
• Cabitaanka limo oronjada
• Limo bambeelmada
• Broccoli ga
• Cavitaanada casiirka ah ee WIC
• Cantaloupe (furuto babaayga u dhow)
Tusaaleyaal ah noocyada aad iskugu dari karto cunooyinka si aad feero badan cunooyinkaas uga heshid:
Samee maraq digir-caagaar laga smeeyey (feerada dhirta laga helo) adiga oo ku daraya hilib yar (feero hilibka laga helo)
Isku dar cerealka feerada-lagu daray(feerada dhirta laga helo) iyo limo oronjo ama limo bambeelmo jeexeed.